०.९० प्रतिशत घट्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ०.९० प्रतिशत घट्यो नेप्से
०.९० प्रतिशत घट्यो नेप्से
मङ्सिर ३, काठमाडौं । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९० प्रतिशत घटेको छ । कारोबार भएको एक घण्टा स्थिर देखिएको बजार त्यसपछि निरन्तर घटेर बन्द भएको हो । नेप्से १३ दशमलव ३४ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय ७५ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५६ कम्पनीको ५ हजार १ सय १८ पटकको व्यापारमा ११ लाख ५५ हजार ६ सय ९२ कित्ता शेयरको रू. ४५ करोड ५२ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ९० प्रतिशत घटेर रू. १७ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ । यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा सबै समूहको परिसूचकमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचकबाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से घटेको हो । होटल समूहको परिसूचक ३ दशमलव ९८ प्रतिशत घटेको छ । यस समूहमा पर्ने ओरियन्टल होटल, सोल्टी होटल, तारागाँउ रिजेन्सि होटलको शेयर मूल्य घटेपछि यस समूहको परिसूचक घटेको हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ८० प्रतिशत घटेर ३ सय १० दशमलव ६० अङ्क पुगेको छ ।
एभरेष्ट बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. १ हजार १ सय ४८ मा रू. ७ करोड ६६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस बैङ्कले शेयरधनीलाई ३३ प्रतिशत बोनस शेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि शेयर मूल्य बढेको हो । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीमा सोल्टी होटल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, अरुण काबेली पावर, सिभिल बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, चिलिमे हाइड्रोपावर र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको रू. ७७ लाखदेखि २ करोड २७ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ५९ प्रतिशत बढेको छ । साथै, मल्टी प्रपोज फाइनान्स लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरि, नेपाल हाइड्रो डेभलपरको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ९ दशमलव १५ प्रतिशत घटेको छ भने मिथिला लघुवित्तको शेयर मूल्य ५ दशमलव ७४ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५६ कम्पनीमा १८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १ सय २४ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, १४ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ३८ दशमलव शुन्य १ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव २४ रहेको छ । यसले बजार वियरिस प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०९:०६
६ चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:०५